Adobe Premiere Pro CC 12.0 (2018) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Computer software Editor Video Editing Adobe Premiere Pro CC 12.0 (2018)
Maung Pauk at 10:52:00 PM Computer software, Editor, Video Editing,
Adobe Premiere Pro CC 12.0 (2018) Full
Video Editing လုပ်တဲ့ Software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Adobe Premiere ဟာ Video Editor တွေ အသုံးပြု အများဆုံး Software ဖြစ်ပါတယ်.. Effect ပေါင်းများစွာ၊ Template ပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီး Feature တွေလည်း စုံလင်ပါတယ်.. တည်းဖြတ်ရလွယ်ကူပြီး ကျွမ်းကျင်သူများအဖို့ တကယ့် အမိုက်စား Video တွေလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်.. နောက်ဆုံးထွက် Adobe Premiere Pro CC 2018 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Windows 64 bit မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
Setup နဲ့ Install လုပ်ပြီးသွားရင် Exit လုပ်ပါ..
Patch ထဲက adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Run As Administrator နဲ့ Run ပါ. Adobe Premiere Pro CC . ကိုရွေးပါ.. Patch လုပ်ပါ.. Patch လုပ်ဖို့နေရာတောင်းခဲ့ရင် C:\_Program Files\_Adobe\_Adobe Premiere Pro CC ကိုသွားပြီး Patch လုပ်လိုက်ပါ..
Video Editing လုပျတဲ့ Software တဈခုဖွဈတဲ့ Adobe Premiere ဟာ Video Editor တှေ အသုံးပွု အမြားဆုံး Software ဖွဈပါတယျ.. Effect ပေါငျးမြားစှာ၊ Template ပေါငျးမြားစှာပါဝငျပွီး Feature တှလေညျး စုံလငျပါတယျ.. တညျးဖွတျရလှယျကူပွီး ကြှမျးကငျြသူမြားအဖို့ တကယျ့ အမိုကျစား Video တှလေညျး ဖနျတီးနိုငျပါတယျ.. နောကျဆုံးထှကျ Adobe Premiere Pro CC 2018 ကိုတငျပေးလိုကျပါတယျ.. Windows 64 bit မှာ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ..
Setup နဲ့ Install လုပျပွီးသှားရငျ Exit လုပျပါ..
Patch ထဲက adobe.snr.patch.v2.0-painter.exe ကို ညာကလဈထောကျပွီး Run As Administrator နဲ့ Run ပါ. Adobe Premiere Pro CC . ကိုရှေးပါ.. Patch လုပျပါ.. Patch လုပျဖို့နရောတောငျးခဲ့ရငျ C:\_Program Files\_Adobe\_Adobe Premiere Pro CC ကိုသှားပွီး Patch လုပျလိုကျပါ..
Adobe Premiere Pro CC 2018 for windows : The new Adobe Premiere Pro CC featuresarevolutionary new video editing system. Adobe Premiere Pro Creative Cloud provides everything you need to make visually stunning videos from simple video effects to professional grade production tools, edit virtually any type of media, and create professional productions, adobe Premiere Pro CC 12.0 2018 has already plenty of features, yet can also be extended with third-party plugins.
Adobe Premiere Pro CC 12.0 (2018) : 1.7 Gb
Patch Only : 72.83 MB